सासुको नि’धन भएपछि कि’रिया बसेकी पार्वतीको यसरि मृ’त्यु, केहि दिनमै जब रह’स्य खुल्यो गाउँलेहरूले उठाए आवाज (भिडियो) – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २०, २०७८ समय: ९:४३:२५
काठमाडौ । श्रीमान श्रीमतीको राम्रो स’म्बन्ध थिएन । श्रीमानले आफ्नै मामाको छोरी बहिनीलाई सौ’ता ल्याएका थिए । उनी आफ्नो सुर गरेर एक्लै बसेकी थिइन् । भरतपुर ६ मा भएको एउटा घट’ना भएको छ । दुई दिन अघि सासुको नि’धन भएपछि पार्वती भट्टराई कि’रिया बसेकी थिइन् । उनको त्यही बेलामा ज लेर नि’धन भएको छ । तर पार्वतीका माइतीले भने र’हस्य’मय भएको बताएका छन् ।
भाई वुहारी सम्झना ढकालले भनिन्, सुतीको कपडा लगाएर किरिया बसेको महिलाको तोरी राखेर बालेको बत्तीले कसरी आ’गो लाग्यो भन्ने शं’का लाग्यो । उनले मान्छे माथि कसरी शं’का गर्नु ? यस्तो घट’ना कसरी भयो भन्ने कुरामा शं’कामा छौं । उनको भदा बु’हारीले पनि घ’टना सं’कास्पद भएको बताइन् । उनले घट’ना भएको बेलामा आफुले नदेखेपनि घ’टना भइसकेपछि आफुलाई बोलाएको र जाँ’दा गाडीमा राखिएको थियो ।
भाई वुहारी सम्झना ढकालले भनिन्, सुतीको कपडा लगाएर कि’रिया बसेको महिलाको तोरी राखेर बालेको बत्तीले कसरी आगो लाग्यो भन्ने शं’का लाग्यो । उनले मान्छे माथि कसरी शं’का गर्नु ? यस्तो घट’ना कसरी भयो भन्ने कुरामा शं’कामा छौं । उनको भदा बुहारीले पनि घट’ना संकास्पद भएको बताइन् । उनले घट’ना भएको बेलामा आफुले नदेखेपनि घट’ना भइसकेपछि आफुलाई बोलाएको र जाँ’दा गाडीमा राखिएको थियो ।
पार्वती भट्टराई आत्तिएको अवस्थामा आफुले देखेको बताइन् । मलाई आमाले संगै संगै लैजान थाल्नुभयो । म जान्छुहोला भन्नुभएको थियो, वुहारीले भनिन् । परिवारमा उनको सम्बन्ध त्यती राम्रो नभएको उनीहरुले बताएा छन् । धेरे वर्ष भयो दिदी र भिनाजु अलग बस्न थालेको उनले बताइन् । एक वर्ष देखि श्रीमान घर बनाएर नजिकै सरेको बताइन् ।छिमेकीहरुले पनि घ:टना रह’स्यमय भएको बताएका छन् । उनीहरुले त्यती ठूलो घट’ना हुँदा पनि एउटै घरमा भएका अरुले किन थाहा पाएनन् ? स्थानिय छिमेकीको भनाई छ । बाँकि तलको भिडियोमा हेर्नुहोस